Macnaha baadhitaanka | Suomen Mielenterveysseura
Helitaanka baadhitaanka xanuunka dhimirua wuxuu badanaa ubaahan yahay todobaadyo ama bilo iyo booqashooyin dhakhtar. Baadhitaanada dhakhtarku soo caddeeyo sida ”niyadjabka dhexdhexaadka ah” ama ”aneroksiya neerfoosa”, waxaa loo baahan yahay in la qeexo qaabka daryeelka, raadsashada fasaxa jirada, xaqa jirada ee KELA-da, raadsashada kaalmada iyo baxnaaninta. Dadka qaba qaarkood xanuunka dhimirka helitaanka baadhitaanku wuu caawin karaa, dadka qaarna baadhitaanka xanuunku wuxuu u keeni karaa murugo.
Baadhitaanadu waxay ku saleysan yihiin waxa loo yaqaan nidaamka ICD-10. Bogga internetka ee Uruka Caafimaadka Adduunka WHO waxaa laga helayaa macluumaad dheeraad ah oo ah luqadda ingiriiska ah.
Ujeedada baadhitaanku waa in la helo qaab daryeel oo ku habboon, isla markaana caawiya qofka buka. Baadhitaanada waad ka faa’iideysan kartaa, markaad raadiso xanuunka dhabta ah ee ku haya waanad ka hortagi kartaa arrimaha xanuunka siyaadinaya, sida isticmaalka khamriga badan ama dhafarka. Sidoo kale waxaad raadsan kartaawarbixin dheeraad ah oo kusaabsan xanuun ka bogsashada ama dhimidda calaamadaha xanuunka.
Waa in la xusuusnaadaa, in ulajeedada baadhitaanku aysan ahayn in la xaddido qofka, ee waa in la xaddido xanuunka, tusaale niyadjab culus mid dhexe ama mid fudud ayaa lagu kala magacaabaa, kuwaas oo lagu cadaynayo in uu yahay niyadjabku mid hoos taga xanuunka dhimirka, calaamadihiisuna yihiin rajo xumo iyo daal.
Waxyaalo badan ayaa baadhitaanka dibadda ka ah: tusaale ahaan, laguma qeexo taariikh nololeedka qofka? Waa sidee xidhiidhka asxaabta shaqadaada iyo qoyskaagu, waxyaalaha ka dhacaya bulshada iyo saameynta ay ku yeelan karaan qofka? Sidee baad u xallin kartaa waqtigan xaadirka dhibaatooyinka noloshaada? Maxay yihiin arrimaha hadda adiga muhiim kuu ah iyo maxaa ku farxad geliya? Baadhitaanada xanuunada dhimirku waxay sheegaan xanuunka iyo calaamadihiisa waa sida uu u arko dhakhtarka dhimirku.
Mar marka qaar way wanaagsan tahay in laga fekero, macnaha uu kuu leeyahay baadhitaanku, saameyn ma ku yeelanayaa shaqsiyaddaada? Marmar baadhitaankaaga waa dhici kartaa inaad ku ogaatid inaad xaqiiqdii u nooshahay si aan caadi ahayn tusaale ”waxaa i haya xanuunka niyadjabka, markaa ma arki karo saaxiibadey.” Khaasatan haddii aad dareento in dhaqankaagii isbedeley baadhitaankaagii ka dib ama aad dareemeyso inaadan ku guuleysan ama aadan bogsan, waxaa laga yaabaa inay wanaagsan tahay inaad ka fekerto meesha uu dhibku ka jiro.